Boorsooyinka maqaarka ee OEM, Bacaha Boorsada Boorsada | Gaofeng
Warshad ayaa diiradda saareysa wax soo saarka boorsada Muddo 20 sano ah oo ay weheliso jaceyl iyo xirfad yaqaan.
Ku takhasustay soo-saarista nooc kasta oo shandado ah iyo alaabada maqaarka ah, kuna takhasustay bixinta
adeegyada OEM dabacsan ee macaamiisha.
Hadafkayagu waa inaanu ku qancinno macaamiisheenna tayo sare leh oo tayo leh oo la isku halleyn karo si loo hubiyo in macaamiil kastaa uu dareemi karo raaxo iyo kalsooni ku aaddan alaabteenna oo ku saabsan dalabyadooda. Alaabadayada ayaa si ballaadhan uga raadisa codsiyadooda suuqa sababtoo ah guryaha wanaagsan. Waxay leeyihiin astaamo badan oo damaanad qaadida baahin iyo codsi.
Xirfadleyda Xiraashka khudaarta xirfadeed ee soo saare maqaar maqaar maqaar saar ah
Boorso gacmeed khudradda maqaar maqaarka xirtay https://gfbags.com
Shiinaha oo Soosaara Nukliyeer dhar-xaraash ah
Boorsada yar ee dharka xayawaanka ah ee loo yaqaan 'Nylon dhar dhar multifunction https://gfbags.com'
Farqiga ugu wanaagsan ee boorsooyinka dharka ah ee loo yaqaan 'Messenger bags' oo ah alaab iibiyaha maqaar
Farqiga ugu wanaagsan ee boorsooyinka dharka ah ee loo yaqaan 'Messenger bags' oo ah alaab iibiyaha maqaar. Rasuullada boorsooyinka dharka qurxinta leh ee maqaarka ka sameysan maqaar Ka dib sanado badan oo sahamin ah iyo ku celcelin ah, Shenzhen Gaofeng bacaha Co., Ltd. waxay aasaastay nidaam xakamayn tayo leh oo kaamil ah. Alaabtaani waxay fududaynaysaa shaqada waxayna yareynaysaa baahida loo qabo shaqaaleynta dad badan. Tani waxay horseeday hoos u dhac ku yimid qiimaha shaqaalaha. Rasuullada boorsooyinka qurxinta ee naasaha ah maqaar Alaabtaani waa amaan in la isticmaalo. Ma jiraan dhadhan sun ah iyo wakiilo loo isticmaalay qaabkeeda ama agabkeeda inta waxsoosaarka la samaynayo.
Boorsada gacansiga shiinaha Xaraashka maareynta maqaarka ee microfiber
Boorsada Gacanta Gashada oo xirta daboolka maqaarka ee microfiber https://gfbags.com
Ka wada hadalka hor-u-hadalka soo-saarka
Xitaa haddii uu jiro kulan hore wax soo-saar hore ah, laakiin tallaabo kasta howsha, wali waxaan wadnaa dood yar, oo ay ka mid tahay sida loo hirgaliyo wax soo saarka si hufan, sida loo gooyo walxaha waxay noqon doontaa mid wax badan badbaadinaysa, dhibaatooyinka aan la kulmi karno inta wax soo saarka ah habka, waa inaan tixgalinta dhammaan arrimaha tixgelin siino. Kulankan soo-saaristiisa ayaa diirada lagu saarayaa geedi socodka wax soo saarka oo dhan, wadahadalkan yarna waxaa loogu talagalay geeddi-socod kasta oo wax soo saar ah, qodobbada ay ka wada hadlayana si faahfaahsan ayey u faahfaahin doonaan.
Naqshadeyntaada ama muunad ama fikradahaaga, daraasadda suuragalnimada, waxay dejisay qorshe horumarineed;
Xullo aalado, midab, iyo qaabab farsameynta astaanta;
Sambal sambal, 5.1 Udir muunad loogu talagalay hubinta macmiilka 5.2 Muunadda tijaabada;
Xaqiiji in sheygu uu galo habka wax soo saarka. Haddii aadan qancin, ku noqo tallaabada labaad, Sameynta sambalka muunad-soo-saarka oo tijaabada muunadda;
Soosaarid, Tijaabinta alaabooyinka la dhammeeyay, Xidhmaynta, Dhoofin
Soo bandhigida GFBAGS
Gaofeng wuxuu diiradda saarayaa waxsoosaarka alaabada kala duwan ee bacaha iyo bacaha, wuxuuna ku fidaa waxsoosaarka dharka kale ee gaarka ah. , waxaan isku dayeynaa inaan noqonno kan ugu fiican.
Waxaan khabiir ku nahay bixinta adeegyadeena macmiilka ah ee OEM macaamiishayada, inka badan 2,000 mitir murabac oo siminaaro ah, Xarig kasta wuxuu xayeysiiyay fikirkayaga ku saabsan shaqada iyo ujeedada esthetics.